SAWIRRO: Soomaaliya iyo Mareykanka oo ka wada-hadlay la-dagaallanka Argagixisada – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
SAWIRRO: Soomaaliya iyo Mareykanka oo ka wada-hadlay la-dagaallanka Argagixisada
January 10, 2022 Xuseen 3
Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga XFS Cabdulqaadir Maxamed Nuur, ayaa kulan la qaatay Ku-simaha safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya Colleen Crenwelge iyo saraakiil katirsan Safaaradda.
Kulanka ayaa looga hadlay xoojinta xiriirka labada dal, gaar ahaan horumarinta Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed iyo la-dagaallanka argagixisada, sida uu ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook Wasiirka Gaashaandhigga XFS.
“Waxaan maanta kulan la qaatay kusimaha Safaaradda Mareekanka marwo Colleen Crenwelge iyo saraakiil katirsan Safaaradda, waxaan ka wada hadalney xoojinta xiriirka labada dal gaar ahaan horumarinta Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed iyo la-dagaallanka argagixisada.”
Wasiir Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa uga mahadceliyay Dowladda Mareykanka taageerada ay siiso dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Mareykanka iyo Ingiriiskaba yaa wax kadhegeysta haddeer, aan ahayn dad iyaga kasii liita?
Mareykanka iyo Ingiriiska gabbaldhac ayay marayaan oo wuxuuna noqon doonaa (haddii Uusan Rabbi Ka Bedbaadinin) gabbal baas sida ay khubaradooda siyaasadeed saadaalinayaan.
Mareykan waxaa ugu dambeysay 6dii Janwari sanadkii hore markii xaruntiisa “dimuqraaddiyadeed” laweeraray oo gudahana loogu dhacay, ayna weerareen isla shacabkiisa caddaanka muxaafidka ah ee cuduudda ugu weyn kuleh – siyaasad iyo dhaqaale ahaanba. Waxaa lasaadaalinayaa in uu daaquudkii Donald Trump ahaa qabanqaabinayo soonoqoshadiisa doorashada sanadka 2024ka ku beegan (Inshaa’Allaah) oo uu si xoogganna loogu codeyn doono.
Waxaa saadaashaas kamid ah in ay qowmiyadaha kala duwan oo dalkaas isasii hubeynayaan oo haddii uusan Trump doorashadaas ku guuleysanin qummaati la iskugu rogman doono. Waxaa lafilayaa in uu dhaco dagaalkii sokeeye ee labaad ee Mareykanka oo sababi doona in uu qummaati ukala burburo.
Dhinaca kalena, Ingiriiska ayaa isna lasaadaalinayaa in wixii United kingdom la isku oran jiray ay ugu dambeysay sanaddii 2016kii markii uu xisbiga muxaafidka ah oo UK toban sano soo kharribayay soohindisay kaarto halis ah oo uu waddankaas ugusii taliyo, taas oo ahayd in la qaado afti UK lagaga saarayo Midowga Yurubta oo ay sikasta iskugu dhafnaayeen (Brexit). Waxaa sidaas ku kala dhintay England iyo saddexda kale – gaar ahaanna Scotland – kuwada dhawaaqay in ay UK ka baxayaan oo EU dib ugu noqonayaan.
Shalay ayaa waxaa lagasoo warramay in ay qowmiyadda Englishku diyaarsanayso maleeshiyo ilaa 10,000 gaaraysa oo tababbarro milatari kaymaha kudhex qabanaysa, ayna u badanyihiin kuwo horraantii ciidamado soo ahaan jiray. Maciishaddii ayaa cirka isku shareertay oo noloshii ayaa ku adkaatay kaddib ka bixitaankii Midowga Yurubta.
Dhaqaale ilaa 1 trillion gaarayana waxaa laga rartay London oo Yurub baa loo raray – waxaana guuraya bangiyada iyo shirkadaha ugu waaweyn ee canshuuraha ugu xooggan dhiiba. Shirkado boqolaal ahna way wada kaceen sanadkii ina dhaafay ee uu UK si rasmi ah EU-da uga baxay.
Kuwanu galbade kuwo kale mooyee.
Fawdadii Somalia ayaad ka hadlaysaa not US & Uk
Waxa aad shubaysaa kama suurtoobi karaan wadamadaas qaranigan maanta la joogo.
Midda saameynt labadaas dal waa mid weli muuqata,kuna amar Ku taaglaynaysa dunida,waxase jirta in maamulka cusub ee USA uu go’aansaday in uu soo gabagabeeyo hawl-galladiisa dibedda,iyo dawlad u samaynta,joogitaankii milateri ee wadamo ay Afghanistan iyo Somalia kamid ahaayeen,lana joojiyo duqaymihii wadankaasu ka fulin jiray wadamadaas.
Saameynta UK & US waa jirtaa,waxayse Ku xidhan tahay hadba siday u adeegsadaan,UN-tana iyagaa haysta,waana la ogyahay waxay wadamo burburiyeen sida Iraq,Syria,Libiya,Yemen,ayna iska fiirsanayeen Russia & China oo ah quwad hadda soo kacaysa,aanse la itaal ahayn Russia & US,Uk milateri ahaan.
Waar falanqaynta siyaasadda soomaalida & midda dunidaba show saaqid baad Ku tahay @Awlalow
Xaggeed ku awdantahay sidaadaba? Saaxiib, adigu hawraar duugowday ayaad iskaga hadaaqday oo waad iska mala’waalaysaa xaqiiqdii.
Adigu, qodobbadaas iyo tirooyinkaas aan sheegay miyaad haysaa kuwo sugan oo beeninaya? Miyaadse akhrisaa warbaahiyeyaasha ugu caansan Yurub iyo Mareykanka? Sababta oo ah, waad la kulmi lahayd qayladhaanka 2024 iyo Brexit ku aaddan ee leyl iyo nahaar lagusoo tebiyo.
Aan sirtoo yar kuufaydee, anigu waxaan kuxiranahay goobo galsheed oo xogaha siyaasadeed iyo dhaqaale ee dunida heer goshiyeed u oddorosa, falanqeeya, oo kafaallooda: sidaada qolalka fadhi-ku-dirirka beenta iyo huuhaada kamasoo jaabajaabeysto.
Ninkii nool isaga arki doona waxa UK iyo US ka dhici doona shanta sano ee soosocda. Markaas ha inoo ahaato.